Arbacada, December 9, 2015 Khamiis, Janaayo 7, 2016 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa in baraha bulshada ee ugu hooseeya iyo bogagga wax laga ogaado ee aan ka helnay soo jiidashada taraafikada bartayada iyo macaamiisheena ay yihiin StumbleUpon. StumbleUpon waxay leedahay in ka badan 30 milyan oo isticmaale. StumbleUpon waxay bixisaa labadaba khibrad isticmaale dabiici ah iyo sidoo kale adeeg daah furid ah, Xayeysiisyada StumbleUpon. Waa barxad qurux badan oo la qabatimo oo soo saar xoogaa hawlgal qoto dheer la leh isticmaaleyaasheeda. Celcelis ahaan Fadhiga turunturoodka dumarka waa 30 daqiiqo, 22 daqiiqo ragga. Xaqiiqdii, 15%